သတင်း - 6tons mini dump truck ကိုဖိလစ်ပိုင်သို့တင်ပို့သည်
Mini dump truck အော်ဒါမှာပြီးစီးသည်နှင့်ပို့ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ Mini dump truck သည်လူကြိုက်များသော dumper series တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ mini dump truck အစီးရေ ၁၀၀ ကျော်ကိုနိုင်ငံအသီးသီးသို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချွေတာပြီးလက်တွေ့ကျသောစျေးနှုန်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ကြောင့်ထရပ်ကားစျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များစေသည်။
Dump truck သည်ကုန်စည်များကိုဟိုက်ဒရောလစ်သို့မဟုတ်စက်ဖြင့်ဆယ်ယူခြင်းမှတဆင့်ကုန်စည်များတင်ဆောင်သောယာဉ်ဖြစ်သည်။ dump truck ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းသည်မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရား၊ ကုန်တင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် အခန်းနှင့်တွန်းအားပေးကိရိယာများ။ ယာဉ်ဘောင်အားတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ပုံသွင်းခြင်းနှင့်၎င်းသည် crossbeams များ၏ကြံ့ခိုင်မှုကိုအာမခံသည်။
မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ထူးခြားသော axle နည်းပညာသည်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဆီစားနှုန်း၊ တက်ရောက်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ တည်ဆောက်မှုအားကောင်းခြင်း၊ ကုန်တင်စွမ်းအားကြီးမားခြင်းစသည့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောလမ်းများနှင့်တံတားတည်ဆောက်မှု၊ ရေထိန်းသိမ်းမှုစီမံကိန်းများအတွက်သင့်တော်စေသည်။
ဤ Mini dump truck များအားအများအားဖြင့်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်ကုန်စည်များသယ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ် (သို့) အုတ်များကိုအရင်းအမြစ်မှဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့သယ်ဆောင်သည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ဒီမီနီအမှိုက်ပုံထရပ်ကားတွေကဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်လုပ်ကြတယ်။
01. ကုန်တင်ကားလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထူးပြု၊ ကုန်တင်ကားများသည်အဘယ်အရာနှင့် ၀ ယ်သူများအမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဖောက်သည်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။
၀၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်တင်ကားများနှင့်နောက်တွဲယာဉ်များကိုဖိလစ်ပိုင်၊ ရုရှား၊ အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ မြောက်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အမေရိကစသည့်နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေ ၆၀ ကျော်သို့တင်ပို့သည်။
03. တရုတ်မှကုန်တင်ကားများနှင့်နောက်တွဲများအားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံခြား ၀ န်ဆောင်မှုဘူတာတစ်ခုရှိသည်။
၀၄။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်၊ ဖောက်သည်ပရောဂျက်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ထရပ်ကားများ: ထွန်စက်ထရပ်ကား၊ အမှိုက်ပုံထရပ်ကား၊ ကွန်ကရစ်ရောစပ်ထရပ်ကား၊ CNG ထရပ်ကား၊ ကုန်တင်ထရပ်ကား၊ တင့်ကားထရပ်ကား၊ အမှိုက်သိမ်းကား၊ All-Wheel Drive Truck, အထူးယာဉ်များ၊ ဘတ်စ်ကားများ။ ရုပ်ရှင်နမူနာများ: Flat bed, Low bed, VAN, Warehouse, Tanker, Car carrier, Logging, Tipper, etc.